Libanona: Fanangonana Kilalao [Fun(d) Raising] · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2018 9:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, polski, English
Araka ny voalazan'ny tranonkalan'izy ireo:
Azonao atao ny manamarina ireo kilalao nomena hatramin'izao ao amin'ny Rakitsary.
Hetsika roa no nokarakaraina ary tokony ho avy tsy ho ela ny fahatelo. Ny voalohany dia ny lalao amin'ny alina manontolo ao amin'ny LINK – Antelias. Nangonina nandritra ny lalao bowling / darts / hockey amin'ny alina ny kilalao.
Ny hetsika faharoa dia natao tao amin'ny biraon'ny RootSpace izay nanaovana ny fotoam-pampianarana mitondra ny lohateny hoe “WordPress ho an'ny tsy geeks” mba hanampiana ireo bilaogera tsy ara-teknika hanatsara ny fahaiza-manaony amin'ny WP.
Manampia amin'ny fampiroboroboana ny hetsika amin'ny alalan'ny fampielezana ny teny ho an'ny namanao na amin'ny fanangonana ny iray amin'ireo famantarana ary mametraka izany ao amin'ny bilaoginao/tranonkalanao.
Ho an'ny vaovao fanampiny, araho ny @lebfunraising ao amin'ny Twitter na midira ao amin'ny vondrona Facebook. Azonao arahana ihany koa ny tenirohy #lebfunraising raha hijery fanehoan-kevitra maro hafa.